Home > Zụọnụ Ndụmọdụ > Top 5 Kasị Ihunanya Train Journeys Na Europe
Ma ị lụrụ maka afọ, ma ọ bụ ka nọ n'oge n'ụzọ nke a mmekọrịta, di na nwunye obula nwere ike irite uru site n'oge dị mma ọnụ. Ọ bụ karịsịa mma na-eme ka mgbalị maka Ɛpo Day. Ejegharị ụgbọ okporo ígwè bụ n'ụzọ zuru okè na-amalite a ihunanya na honiimuunu getaway na onye ị hụrụ n'anya. Adị nwayọọ site obodo ma ọ bụ n'elu ugwu. Agazu gara aga maa mma, oge ochie obodo ma ọ bụ ndị nke ụsọ a ice ọdọ. Ebe a na- n'elu 5 kasị ihunanya ụgbọ okporo ígwè njem na Europe. Onye ọ bụla na-enye ihe pụrụ iche maka Ɛpo Day.
Nke a ụgbọ okporo ígwè na njem ga-eme ka ị na onye ị hụrụ n'anya site lush obodo. Mgbe ahụ ị ga-tụgharịa gara aga nwere ugwu nke Switzerland na Austria. Osote, you ga-ahụ ebe nkiri mara mma nke Verona nke beforetali tupu ị banye n'ọdụ ụgbọ mmiri Venetian Grand Canal..
Talking the train through France you’ll be exposed to the famous color and light of the country. Si-acha odo odo lavender ubi Cote d'Azur-acha anụnụ anụnụ mmiri. Iju na ụzọ nke ọlaedo ìhè anyanwụ magically immerses ya niile, na na maka a na-emeso. Malite na ndị kasị ihunanya obodo niile, Paris, gị tren njem ga-agafe dreamy coastlines nke ịrịba ama osimiri. Ll ga-emekwa lee ọmarịcha obodo nta na anwu anwu ma lavender ubi nke Provence.
Florence na Rome, Italy
Amalite gị ihunanya ụgbọ okporo ígwè njem Zurich. Gị Bahnhofstrasse, otu n'ime ndị kasị mara mma shopping n'okporo ámá n'ụwa, na ịzụta a memento. Iju na ahụ kwesịrị ịrịba ama ọrụ nke Van Gogh na Monet na nke ukwuu-hụrụ n'anya Kunsthaus art gallery. Enwere ọtụtụ ihe maka ndị di na nwunye ime na Zurich tupu ha abanye na sinik ahụ ụgbọ okporo ígwè na Innsbruck. Njem tinyere bịara n'ikperé mmiri nke Lake Zurich kwupụta ịrịba ama Alpine mma. Ị ga-agabiga ọmarịcha ugwu ala ahịhịa juru na ebube vistas. Gịnị nwere ike ịbụ ihe ihunanya?
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftop-5-romantic-train-journeys-europe%2F%3Flang%3Dig- (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
#romance London ihunanya ihunanya njegharị njem travelparis travelrome njem